G/ degmada Tawfiiq ee Mudug oo Puntland ugu baaqay in adeegyada nolasha laga taageero (Dhagayso) – Radio Daljir
Agoosto 12, 2013 8:47 g 0
Tawfiiq, August, 11, 2013 – Guddoomiyaha degmada Tawfiiq ee gobolka Mudug oo ah degmo dhawaan lagu soo diray degmooyinkii horay u jiray ee Puntland Maxamuud Yuusuf Xirsi (Burleeb) ayaa ka waramay? sooyaalkii iyo taariikhdii lagu aas aasay degmada Tawfiiq ee gobolka Mudug.
Guddoomiye Maxamuud Yuusuf ayaa sheegay inay Tawfiiq hodan ku tahay waxsoosaarta tacabka xoolaha, inkastoo uu xukuumadda ka codsaday in laga taageero adeegyada nolasha aas-aasiga u ah sida waxbarashad, caafimaadka, iyo adeegyada hormarintaba.
?Degmada Tawfiiq waxay hodan ku tahay dhanka xoolaha iyo ugaarta, runtii bulshada deegaanka kaliya ayaa isku tashtay oo samaystay adeegyada waxbarashada iyo caafimaadka, balse waxaa muhiim noo ah in dawladda Punlland iyo jaaliyadda dibaduba ay naga caawiyaan adeegyada nolashada daruuriga u ah? sidaasin waxaa yiri guddoomiyaha degmada Tawfiiq ee gobolka Mudug Maxamuud Yuusuf Xirsi (Burleeb)